कलंकको निराशाजनक प्रतिकृया: अनमोल र सलीनलाई कती फाईदा ? « Mazzako Online
कलंकको निराशाजनक प्रतिकृया: अनमोल र सलीनलाई कती फाईदा ?
२०७५ को अन्तिममा रिलिज गरिएका नेपाली फिल्म “ए मेरो हजुर -३’ र “जात्रा” दुबै फिल्मले ओरालो लागेको नेपाली फिल्मी ब्यापार सुधारेको बुझ्न सकिन्छ । तर नेपाली फिल्म रिलिज हुने क्रममा सधै झै बलिउडको त्रास यसबेला पनि थियो । चैत्र २९ गते एकै दिन रिलिज भएका दुबै फिल्मले लगभग आफ्नो लगानी सुरक्षित गरिसकेको अवस्था छ । तर फाइदामा जाने बेला बलिउडको प्रतिक्षित फिल्म “कलंक” रिलिजले माहोल तनाब पुर्ण पारेको थियो ।
कलंकलाई लिएर चलचित्र संघमा खैलाबैला पनि मच्चियो । भारतमा बुधबार रिलिज भएको फिल्म नेपालमा नेपाली नियम अनुसार चलाईनुपर्ने अडान चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष केशव भट्टराइले राखे । अध्यक्ष भट्टराइको उक्त कदम लाई धेरै ले सही थपे भने सिनेमाका वितरक र केही हलसंचालक लाई भने छट्पटी भयो ।
तर मल्टी स्टार रहेको बलिउड फिल्मले वर्ड अफ माउथ नकारात्मक पाएपछि ब्यापार पनि चिप्लियो । पहिलो दिन २१ .६० करोड ब्यापार गरेको फिल्म ले दोस्रो दिन ११ .४५ करोड मात्र कमाई गर्‍यो । उक्त फिल्ममा बरुण धवन, आलिया भट्ट, सोनाक्षी सिन्हा, आदित्य रोय कपुर, संजय दत्त, मादुरी दिक्षित लगायतको मुख्य भूमिका छ । कलंकले अगतिलो प्रतिकृया पाएपछी भने ‘यात्रा’ र ‘ए मेरो हजुर-३’ ले पक्कै लामो सास फेरेका छन् ।